लिम्फोमाका बारेमा अझै पनि धेरै मानिस अनविज्ञ रहेको पाइन्छ । पछिल्लो समय बच्चाहरुमा लिम्फोमा रोग बढी देखिन थालेको छ । लिम्फोमा गम्भीर प्रकृतिको रोग भएकाले पनि यसको बारेमा जानकार हुनु आवश्यक छ । के हो लिम्फोमा ? बच्चामा यो कसरी लाग्छ ? लक्षण के कस्ता देखापर्छन् ? र बच्न के कस्तो सावधानी अपनाउने ? अंकुरण खबरका लागि बाल रोग,बाल क्यान्सर तथा रक्त रोग विशेषज्ञ डा.प्रकाशनीधि तिवारीसंग गरिएको कुराकानीमा आधारित अंश… लिम्फोमा भनेको के हो ? लिम्फोमा भनेको एक प्रकारको क्यन्सर हो । विशेष गरेर Epstein Barr Virusको संक्रमणबाट ग्रन्थीमा हुने एक प्रकारको क्यान्सरलाई नै लिम्फोमा भनिन्छ । बच्चाहरुमा पनि लिम्फोमा देखिने गरेको पाइन्छ । रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका विशेषतः ४ वर्षदेखि १२ वर्षका बच्चाहरुमा लिम्फोमा बढी देखिने गरेको पाइन्छ । सामान्यतया हजकिन र नन्हजकिन गरि लिम्फोमा २ प्रकारको हुन्छ लिम्फोमा हुने कारण : लिम्फोमा यही कारणले हुन्छ भन्ने भन्दा पनि जसमा रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता कम छ, उसमा यसको संक्रमण हुने संभावना बढी हुन्छ । त्यस पछि वंशाणुगत गुण, एचआइभी एडसको संक्रमण ,गर्भावस्थामा विभिन्न पोषण तत्वको कमी लगाएतका कारणले हुनसक्छ । यसको अलाबा कहिले काँहि कुनै कारण नै थाँहा नहुदै पनि यो देखा पर्न सक्छ । लिम्फोमाका लक्षणहरु : पटक पटक ज्वरो आउने । ज्वरो आए पछि औषधि सेवन गर्दा पनि छिट्टै निको नहुने । एक्कासी तौल घट्ने । खलखली पसिना आउने । शरीरका विभिन्न भागमा गिर्खाहरु आउने । खाना अरुची हुने । नशाहरु सुन्निने । ठुलो मानिसको तुलानामा बच्चामा क्यान्सर लाग्यो भने धेरै छोटो निको हुन्छ । समयमै या पहिलो चरणमै यसको सही उपचार भयो भने यो छोटो समय मै पूर्ण ठीक हुनसक्छ । चकित्सको सल्लाहा बमोजिम भनेको मान्यो साबधानी अप्नायो भने बच्चाले सहज जीवनयापन जीउन सक्छ । यसको बेलैमा उपचार गरिएन भने अन्य अंगमा के कस्तो असर गर्छ ? यसको संक्रमण बढ्दै गयो भने कलेजो,फियो सुन्निने,कहिलेकाही बोन म्यारोमा फैलने,मस्तिष्क या ढाडमा समेत फैलन सक्छ र मृत्युसमेत हुने गर्दछ । यसको उपचार विधि के कस्तो हुन्छ ? लिम्फोमा कुन अवस्थामा पुगेको छ सोही अनुसार यसको उपचार विधि निर्धारण हुन्छ ।पहिलो, दोस्रो चरणमा छ भने करिब तीन हप्ता औषधि चलायो भने पूर्ण ठीक हुन्छ । भने तेस्रो चरणमा छ भने कुनैमा ५ हप्तासम्म पनि चलाउनु पर्ने हुन सक्छ ।चौथो पाचौं चरणमा पुगेको छ भने कडा उपचार गर्नु पर्ने हुन सक्छ यो अवस्थामा पुगेका बिरामी ५० प्रतिशत मात्र बाच्ने संभावना रहन्छ तर जति पछि उपचार गर्यो उती ढीला, अप्ठ्यारो,महंगो पर्न सक्छ र दोहोरीने संभावना पनि बढी रहन्छ । यसबाट बच्न के गनुृपर्छ ? यही कुरामा सावधानी अप्नायो भने यस्तो क्यान्सरबाट बच्न सकिन्छ भन्ने हैन तर यो बाट बच्न गर्भावस्थामा जथाभावी औषधिको सेवन नगर्ने । यदि आफ्ना अग्रज कसैलाई यस्तो समस्या छ भने या माथिका कुनै पनि लक्षण देखियो भने तुरुन्त विशेषज्ञकोमा स्वास्थ परीक्षण गर्नुपर्छ । यसको उपचार महंगो भएकाले पनि पहिलो सुरुवाती चरण वा पहिलो दोस्रो चरणमा हुँदै उपचार गरायो भने पूर्ण निको हुन्छ । (डा.तिवारी ईसान बाल तथा महिला अस्पतालमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)